2022 ခုနှစ်မှာ နာမည်​ကျော်ကြားပြီး လူကြိုက်များလာမယ်လို့ ပရိသတ်​တွေ ခန့်မှန်းထားတဲ့ K-Drama စုံတွဲ (၄) တွဲ
K-drama ​လောကရဲ့ ထုံးစံအရ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နာမည်​ကျော်ကြားပြီး လူကြိုက်များတဲ့ K-drama စုံတွဲ​တွေ ​ပေါ်​ပေါက်လာ​​လေ့ရှိပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်လည်း Song Joong Ki နဲ့ Jeon Yeo Bin, Lee Do Hyun နဲ့ Go Min Si, Kim Seon Ho နဲ့ Shin Min Ah, Song Kang နဲ့ Han So Hee တို့လို ပရိသတ်အချစ်ကို တစ်ခဲနက် ရရှိခဲ့တဲ့ K-drama စုံတွဲ​တွေ ​ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာလည်း ဘယ် K-drama စုံတွဲ​တွေက ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ​လောလ​ောဆယ်မှာ​တော့ ပရိသတ် အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိ​နေပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ နာမည်ကြီး K-drama စုံတွဲ​တွေဖြစ်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရတဲ့ စုံတွဲ ၄ တွဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွဲ​တွေက​တော့…
1. Song Kang နဲ့ Park Min Young
ယခုနှစ် ဇွန်လတုန်းက “The Cruelty of Office Romance” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Song Kang နဲ့ Park Min Young တို့ အဓိကဇာတ်​ဆောင်​တွေအ​နေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်သွားမယ်လို့ JTBC ရုပ်သံလိုင်းက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ကိုရီးယား နက္ခတ်​ဗေဒဌာနမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဝန်ထမ်း​တွေရဲ့ ဘဝကို ပုံ​ဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီး Park Min Young ဟာ “What’s Wrong With Secretary Kim”, “Her Private Life” စတဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မင်းသား Song Kang ကလည်း “Love Alarm”, “Nevertheless” တို့လို melodrama ​တွေမှာ သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့​ကြောင့် သူတို့ ၂ ဦးရဲ့ ပိတ်ကားထက်​ပေါ်က တွဲဖက်မှုကို ပရိသတ်​တွေက အရမ်းကို ​မျှေုာ်လင့်​စောင့်စားလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီ drama အသစ်ကို ​ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလကုန်​လောက်က စတင်ရိုက်ကူး​နေပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်ထဲမှာ JTBC က​နေ ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Song Joong Ki နဲ့ Shin Hyun Bin
၂၀၂၁ ခုနှစ်အစမှာ နာမည်ကြီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ “Vincenzo” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးပြီး​နောက်မှာ​တော့ မင်းသား Song Joong Ki ဟာ “The Youngest Son ofaConglomerate” ဆိုတဲ့ drama အသစ်ကို “Hospital Playlist” မင်းသမီး Shin Hyun Bin နဲ့အတူ သရုပ်​ဆောင်သွားမယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။
နာမည်ကြီး ဝတ္ထုကို ပြန်လည်အသက်သွင်းသွားမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင် လုပ်ငန်းရှင်သူ​ဌေးက မှားယွင်းစွပ်စွဲ လုပ်ကြံခံရပြီး​နောက် ထိုသူ​ဌေးမိသားစုမှာပဲ လူဝင်စားအဖြစ် ပြန်လည်​မွေးဖွားကာ လက်တုံ့ပြန်သွားမယ့် Jin Do Joon ဆိုတဲ့ လူတစ်​ယောက်အ​ကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီး Shin Hyun Bin က​တော့ လုပ်ငန်းရှင်သူ​ဌေး​တွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု​တွေကိုမှ လိုက်လံ​ဖော်ထုတ်တတ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ စုံစမ်း​ရေးမှူးအဖြစ် သရုပ်​​ဆောင်သွားမှာပါ။ လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ထဲမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမယ့် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ “Vincenzo” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ရသမျိုးနဲ့ romance chemistry မျိုးကို ထပ်မံ​ပေးစွမ်းသွားနိုင်ဦးမယ်လို့ ​မျှော်လင့်ရပါတယ်။
3. Kim Young Dae နဲ့ Lee Sung Kyung
“Weightlifting Fairy Kim Bok Joo” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပရိသတ်အချစ်ကို စတင်ရရှိလာခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Lee Sung Kyung ဟာလည်း လာမယ့်နှစ်ထဲမှာ တီဗီဖန်သားပြင်​ထက်ကို ပြန်လည်​ရောက်ရှိလာ​တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာ​တော့ သူမကို “Extraordinary You”, “Penthouse”, “Cheat On Me If You Can” စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေနဲ့ တစ်ဟုန်ထိုး ​အောင်မြင်လာတဲ့ Kim Young Dae နဲ့အတူ “Shooting Star” ဆိုတဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာ မြင်​တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ​လေးက​တော့ ​အေဂျင်စီရဲ့ PR အဖွဲ့​​ခေါင်း​ဆောင်နဲ့ စူပါစတားတို့ရဲ့ ရန်သူ​တွေက​နေ ချစ်သူ​တွေဖြစ်သွားကြတဲ့အ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ K-drama စုံတွဲက​တော့ ပရိသတ်​တွေ ယခင်က မ​​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​ပေါင်းစပ်မှုမျိုးဖြစ်တာ​ကြောင့် တစ်မူထူးခြားကာ စိတ်ဝင်စားစရာ​ကောင်း​​နေပါတယ်။ သတင်း​တွေအရ “Shooting Stars” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက စတင်ရိုက်ကူး​နေပြီလို့ သိရှိရပြီး ​နောက်နှစ်ထဲမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. Moon Ga Young နဲ့ Yeo Jin Goo
​၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ပရိသတ်​တွေ ​မျှော်လင့်​နေကြတဲ့ နောက်ဆုံး K-Drama စုံတွဲက​တော့ “Link : Eat and Love to Kill” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်မယ့် မင်းသား Yeo Jin Goo နဲ့ မင်းသမီး Moon Ga Young တို့အတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် ယခင်က မင်းသား Kim Seon Ho နဲ့ မင်းသမီး Kim Ji Won တို့ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့​ပေမဲ့ ငြင်းပယ်ခဲ့တာ​ကြောင့် အခု မင်းသား Yeo Jin Goo နဲ့ မင်းသမီး Moon Ga Young တို့ကို ကမ်းလှမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင် တစ်​​နေ့တည်းမှာ ​ပျော်ရွှင်မှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ နာကျင်မှုစတဲ့ ခံစားချက်မျိုးစုံကို ခံစား​နေရတဲ့ လူငယ် ၂ ဦး ​တွေ့ဆုံမိကာ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်​တွေကို ပွင့်လင်းစွာ မျှ​ဝေကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Yeo Jin Goo နဲ့ Moon Ga Young တို့ ၂ ဦးလုံးဟာ “Hotel Deluna” နဲ့ “True Beauty” တို့လို romance drama ရိုက်ကူးဖူးတဲ့ အ​တွေ့အကြုံရှိကြပြီး ၂ ဦးလုံးဟာ တစ်ချိန်က က​လေးသရုပ်​ဆောင်​တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က “Ja Myung Go” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ က​လေးသရုပ်​ဆောင်အဖြစ် အတူရိုက်ကူးခဲ့ဖူးတာ​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အတွဲညီမှုကို ဘယ်လိုပြသသွားမလဲဆိုတာကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ​စောင့်​မျှော်လျက်ရှိပါတယ်။
Source : Kdramastarz
Next Dating လုပ်တာက သူတို့အတွက် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း တွေးဆကာဖြေကြားခဲ့ဖူးတဲ့ Suga နဲ့ Jimin »
Previous « ၆ နှစ်ကြာသံယောဇဉ်ကို ဖြတ်သိမ်းပြီး ချစ်ရတဲ့အရာတွေအတွက် ရဲဝံ့စွာရှေ့ဆက်သွားမယ့် Yang Zi